आजको बहस : रङ्गिन फिल्मी दुनियाँको कुरूप वास्तविकता
उषा पाण्डे/ सिनेपाटी | प्रकाशित: २०७७, असार १७, बुधबार
यति बेला सामाजिक सञ्जाल अनि इन्टरनेटमा निकै चर्चामा छिन् बलिउड अभिनेत्री कङ्गना रनावत । बलिउडले सधैँ विवादित अभिनेत्रीको ट्याग दिलाएकी अभिनेत्रीलाई सुन्ने र उनको कुरामा ताली बजाउने हिम्मत आज हामी सबैले गरिरहेका छौँ । सायद अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आफ्नो आत्महत्यालाई यसरी रहस्यमय नबनाएका भए सारा मिडिया अनि फिल्म कर्मीद्वारा एक हिसाबले बहिष्कार गरिएकी अभिनेत्रीलाई सुन्ने र सही या गलतको नाम दिने फुर्सद हामी कसैलाई हुँदैन थियो ।
सुशान्तले आत्महत्या गरे! निकै सुन्दर भविष्य बोकेर एउटा सिङ्गो संरचनासँग लडिरहेका उनको मृत्युले फिल्म प्रेमी हामी सबैको होस नै उडाइदियो केही समयका लागी । नढाँटी भनूँ त जुन दिन सुशान्तले आत्महत्या गरेको खबर आयो त्यो दिन पछिका हरेक रात एक किसिमको उकुसमुकुसले राम्रोसँग निदाउन दिएको छैन । कारण उनको आत्महत्या मात्र होइन । यस दिन यता केही समय आफू वरिपरिको समाज, श्रद्धाञ्जली दिँदा 'रिप'को नारा लगाउने जमात (आफू सहित), 'तिमीलाई परेको समस्या मलाई भन यो एकदम गोप्य रहने छ' सम्म भनि टोपल्ने साथी हुन नसकेका साथीहरू, अनि हिम्मत गरेर सबै सामु यथार्थ ओकल्दा इज्जतको लिलाम गरिदिने बौद्धिकको आत्माले निकै तर्साउने गरेको छ । जब सामाजिक सञ्जालमा कङ्गना बोलेको आवाज कानमा पर्छ त्यो आवाजले सम्झाउँछ केही समय उनलाई पागलको संज्ञा दिने तमाम मनोवैज्ञानिक दार्शनिकहरूलाई । आज पनि उनको पक्षमा बोल्ने हिम्मत त बलिउडलाई एक आदर्श उद्योग मान्ने हामी आम दर्शकमा मात्र छ। किनकि हामीले निकै रङ्गिन र सुन्दर, चट्ट मिलेको देख्ने बलिउड भित्रबाट कति कुरूप छ र कति निर्मम छ भन्ने महसुस गर्न पाएका छौँ । हामी आज उनीहरू विरुद्ध लागेका छौँ जसले यो रङ्गिन दुनियाँको ठेक्का लिएको छ तर हाम्रो यो विरोधले उसलाई निकै न्यून असर गर्छ जुन हामीलाई थाहा छ । खासमा कुरा बलिउडसँग जोडिएको छ र हामीले कहिल्यै नछुट्ने गरी जोडेका छौँ यसर्थ सुरुमा कुरा उसकै आउँछ ।
सुशान्तले आफ्नो मृत्यु रहस्यमय त बनाए तर उनले सिङ्गो फिल्म इन्डस्ट्रीको रहस्य उदाङ्गो बनाइदिए । बलिउड मात्र होइन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि उनको मृत्युले निकै हलचल ल्याइदियो । माथि भनेँ नि उनको मृत्युले जसरी मलाई निदाउन दिएको छैन उसै गरी हाम्रो रङ्गिन दुनियाँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई जागा गरिदियो । कसैलाई आफूले भोगेका र आवाज उठाउन नसकेका कुराले पिरोल्यो कतिलाई आफूले गरेका गल्ती जुन कहिल्यै स्वीकार गर्ने हिम्मत जुट्दैन उसले पिरोल्यो, कसैलाई आफूले जानीजानी कसैको आवाज बन्न नसकेकोले पिरोल्यो त कसैलाई मलाई जस्तै संसारलाई रङ्गिन दुनियाँमा लैजाने अनि आफू बाँचेको अँध्यारोले हरेक रात अंश गर्दै निभ्दै जाने उज्यालोले पिरोल्यो ।
बलिउडमा जति जति नातावाद, कृपावाद र अन्य धेरै वादहरूको बहस चल्दै गयो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका कला कर्मीले पनि यस विषयमा सोच्ने मौका पाए । कतै आफू पनि यिनै वादहरूको चङ्गुलमा फसेरै अगाडी बढ्न नसकेको त होइन भन्ने प्रश्न आफैलाई गर्न थाले । सायद केहीलाई यस विषयमा केही बोल्नु थिएन, उनीहरू बोलेनन् सायद केहीले अनुभव गरे र बोल्ने हिम्मत गरे, अझ केहीले अनुभव गरे तर बोल्न अझै बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । अझ केहीले बोल्ने आँट हुँदाहुँदै पनि बोलेका छैनन् किनकि उनीहरूलाई थाहा छ यो समाज अनि कथित सभ्य शिक्षितको बथानमा बोल्नु भनेको आफ्नै हुर्मत लिनु हो । जसोतसो बाँचिरहेको आत्मलाई घाँटी थिचेर मार्नु हो । हामी सबैलाई थाहा छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री सानो छ यहाँ हुने प्राय कुरा, घट्ने प्राय घटना अधिकांश सबैलाई थाहा हुन्छ । उसो त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नातावादले खासै विरासत जमाएको छैन । एकाध बाहेक स्टार किडहरुले फिल्म इन्डस्ट्रीमा आफूलाई स्थापित गराउन सकेका छैनन् । यो बहसको विषय नै रहेन सायद । तर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री एउटा यस्तो धरातलमा छ जुन बुझेरै हुनसक्छ कलाकारिता (फिल्म इन्डस्ट्री)मा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहने आफ्ना छोरा छोरीलाई बाबु आमाले त्यति सजिलै साथ दिँदैनन् । यो भने बहसको विषय बन्न सक्छ । यिनै बहस अनि सही गलत खुट्ट्याउने क्रममा एकाएक नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा अनपेक्षित बतास चल्यो । त्यो बतास अरु केही नभएर अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले सार्वजनिक गरेको एक भिडियोले ल्याएको झोक्का थियो । जुन यति बेला सम्म आइपुग्दा आँधीको रूप लिँदै अगाडी बढिरहेको छ । साम्राज्ञीले आफूले पाँच वर्ष अभिनेत्री भएकै कारण भोगेका पिडा र दुर्व्यवहारको कुरा उठाएकी थिइन् । उनले सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियो धेरैको लागी बिझाउने काँडा बन्यो होला, बाटोको बाधा बन्यो होला । यसले नराम्रो सँग चिमोट्यो चर्चित अभिनेता भुवन केसीलाई । जसले गर्दा उनले आरोप प्रत्यारोपको बाटो खने र यति बेला उनी यसै यात्रामा आफ्नो पक्षमा मत जम्मा गरिरहेका छन् । अझ खेती गरिरहेका छन् लाञ्छना र नैतिकता माथिको प्रश्नको ।
साम्राज्ञीले सार्वजनिक गरेको भिडियो मसम्म पनि आइपुग्यो यो कुनै नौलो कुरा भएन, उक्त भिडियो मन नहुँदा नहुँदै हेरेँ, भिडियो बजिरहँदा मेरो अगाडी त्यहाँ कुनै नेपाली अभिनेत्री साम्राज्ञी बोल्दै थिइनन् बलिउडकी कङ्गना बोल्दै थिइन् । कहिल्यै इन्स्टामा रियाक्ट वा रेस्पोन्स दिन जाँगर नचलाउने मेरा औँलाले तुरुन्त रियाक्ट गरे । मन ढक्क फुल्यो, सोचेँ, 'तिमीले केही ढिला गर्‍यौ यी सब कुरा बाहिर ल्याउन तिमी त धेरै अगाडी यसरी हिम्मत बोकेर आउनु पर्ने!' फेरी मनले भन्यो फलाममा घन बजार्ने भनेकै तातेको बेला हो । अरु बेलामा त जति नै गरे पनि चाहेको रूप दिन सकिन्न । तिमीले ठिक समयमा बोल्यौ । उति बेला पनि लागेकै थियो अब साम्राज्ञी अझ बलियो हुनु पर्छ । यसरी हिम्मत गरे पछि अब हरेक पाइला अनि तिम्रो बोलीमा तिम्रो इज्जत अनि तिमी नियत माथि उठ्ने प्रश्नको सामना गर्ने साहस जुटाउनु पर्छ । किनकि थाहा थियो तिमी उही बलिउडकी कङ्गना थिइनौ तिमी त नेपालकी साम्राज्ञी थियौ जसले हाम्रो समाजको एक इज्जतदार सम्मानजनक अनि सबैका प्रिय मान्छेहरूका बारेमा बोल्दै थियौ । अब तिम्रा लागी सोधिने प्रश्न भनेकै 'चर्चामा आउन किन यती गिर्‍यौ देखी के स्वार्थ पुरा भएन ?' सम्म हुन् जुन तिमीले स्विकार्नु पर्छ र जवाफले हरेक गालामा थप्पड लगाउनु पर्छ । साँच्ची यी सबको जवाफ दिने हिम्मत त छ नि !
आज सामाजिक सञ्जाल चहारिरहँदा बर्सिएको घृणा अनि प्रश्नले एउटा नारी भएर अगाडी बढ्न चाहनु अनि आफूले देखेका सपना पुरा गर्नु, आफ्नो शरीरलाई कसैको बिर्ता नमान्नु नै गल्ती हो भन्ने महसुस भइरहेछ । मरेपछि ताली दिने यो समाज जिउँदा र जिउन चाहनेको लागी होइन कि भन्ने प्रश्न पनि उठिदिन्छ । सम्झन्छु किन आजसम्म कोही पुरुषले आफू माथि महिलाले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएर आफू चर्चामा आउन चाहेनन् सायद चर्चामा आउने रहर र उनीहरूलाई नि हुँदो हो नि होइन र ? द्रौपदी झैँ दुनियाँको अगाडी लाज नाङ्गिन्छ इज्जत अनि नियतलाई जुवामा लगाउनु पर्छ भन्ने जानेरै बोल्नु अलिकति गल्ती तिम्रो वा हाम्रो पनि हुन सक्छ । सधैँ हामीलाई नुनको बदलामा पसिना मात्र होइन अलिकति रगत अनि केही टुक्रा मासु पनि त्याग गर्नु पर्छ भनेर सिकाइनु पर्थ्यो र त कङ्गना अनि साम्राज्ञीहरु जन्मिइरहने थिएनन् ।
दिलिप र अशिष्माको ‘चल्यो मायाको बतास’ (भिडियो)